ကုမ္ပဏီရဲ့ ပထမဆုံး 12nm chipset ဖြစ်တဲ့ Kirin 710 ကို Huawei မိတ်ဆက် =======
အလယ်အလတ်တန်းစား ထုတ်ကုန်တွေအတွက် Huawei က မိတ်ဆက်မယ့် ပရိုဆက်ဆာသစ်ကို စောင့်ဆိုင်းနေတာဟာ လအတန်ကြာရှိနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Kirin 659 ကို ဖုန်းအများအပြားမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့နောက် အခုအခါမှာ mid-range ပရိုဆက်ဆာသစ်ဖြစ်တဲ့ Kirin 710 ကို Huawei က မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Kirin 710 ဟာ Huawei ရဲ့ ပထမဆုံး 12nm chipset ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး 16nm Kirin 659 ထက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းပြီး စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအနေနဲ့ Kirin 710 ရဲ့ single-core စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ Kirin 659 ထက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားပြီး multi-core စွမ်းဆောင်ရည်မှာတော့ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုမြင့်မားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီ chipset မှာ 2.2GHz Cortex-A73 core လေးခုနဲ့ 1.7GHz Cortex-A53 core လေးလုံး ပါဝင်ပါတယ်။ GPU က ARM Mali G5 ဖြစ်ပြီး Kirin 659 ထက် ၁.၃ ဆ ပိုမိုကောင်းမွန်ကာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု တစ်ဆ သက်သာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် LTE Cat. 12 နဲ့ Cat.13 အပြင် dual-SIM dual-4G VoLTE ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
Image signal processor နဲ့ digital signal processor တို့ကလည်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာသလို အလင်းအားနည်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာ ကင်မရာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းအောင် အဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် scene recognition နဲ့ Face Unlock အတွက် အထောက်အပံ့လည်း ပါဝင်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အလယျအလတျတနျးစား ထုတျကုနျတှအေတှကျ Huawei က မိတျဆကျမယျ့ ပရိုဆကျဆာသဈကို စောငျ့ဆိုငျးနတောဟာ လအတနျကွာရှိနပေါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက မိတျဆကျခဲ့တဲ့ Kirin 659 ကို ဖုနျးအမြားအပွားမှာ ထညျ့သှငျးအသုံးပွုခဲ့တဲ့နောကျ အခုအခါမှာ mid-range ပရိုဆကျဆာသဈဖွဈတဲ့ Kirin 710 ကို Huawei က မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
Kirin 710 ဟာ Huawei ရဲ့ ပထမဆုံး 12nm chipset ဖွဈပါတယျ။ အရှယျအစားသေးငယျပွီး 16nm Kirin 659 ထကျ စှမျးဆောငျရညျပိုကောငျးပွီး စှမျးအငျသုံးစှဲမှုနညျးပါးပါတယျ။ စှမျးဆောငျရညျပိုငျးအနနေဲ့ Kirin 710 ရဲ့ single-core စှမျးဆောငျရညျဟာ Kirin 659 ထကျ ရ၅ ရာခိုငျနှုနျး ပိုမိုမွငျ့မားပွီး multi-core စှမျးဆောငျရညျမှာတော့ ၆၈ ရာခိုငျနှုနျး ပိုမိုမွငျ့မားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီ chipset မှာ 2.2GHz Cortex-A73 core လေးခုနဲ့ 1.7GHz Cortex-A53 core လေးလုံး ပါဝငျပါတယျ။ GPU က ARM Mali G5 ဖွဈပွီး Kirin 659 ထကျ ၁.၃ ဆ ပိုမိုကောငျးမှနျကာ စှမျးအငျသုံးစှဲမှု တဈဆ သကျသာပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ LTE Cat. 12 နဲ့ Cat.13 အပွငျ dual-SIM dual-4G VoLTE ကို ထောကျပံ့ပေးနိုငျပါတယျ။
Image signal processor နဲ့ digital signal processor တို့ကလညျး ပိုမိုကောငျးမှနျလာသလို အလငျးအားနညျးတဲ့အခွအေနတှေမှော ကငျမရာရဲ့စှမျးဆောငျရညျ ပိုကောငျးအောငျ အဆငျ့မွှငျ့ထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ scene recognition နဲ့ Face Unlock အတှကျ အထောကျအပံ့လညျး ပါဝငျလာတယျလို့ သိရပါတယျ။